Home News Maxaa Kasoo Bixi Kara Shirka Maamul Goboleedyada Ee Kismaayo
Maxaa Kasoo Bixi Kara Shirka Maamul Goboleedyada Ee Kismaayo
Sida uu Hoggaamiyaha maamulka Puntland Cabdiweli Gaas baahiyay waxaa lagu wadaa in agaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland 3-da bisha September 2018, uu ka furmo shir khaasa oo u dhexeyn doona Hogaamiyayaasha maamulada iyo xubno muhiima oo laga soo kala xuli doona maamulada.
Shirka oo la sheegay inuu leeyahay ahmiyad gaara ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo inta badan maamulada ay wajahayaan doorashooyin is xigxiga, waxaana soo baxaaya warar kala duwan oo ku saabsan shirka ka furmi doona magaalada Kismaayo.
Illo ku dhow dhow xoghayaha guud ee Golaha iskaashiga maamul Goboleedyada Cabdi Cali Raage oo diyaarin doona ajandaha shirka ayaa laga soo xigtay in shirka uu xoogiisa khuseyn doono arrimaha doorashooyinka.
Waxaa laga soo xigtay inuu jiro shaki muujinaaya in dowlada Somalia ay dhaqaale xoogan ku bixineyso tirro musharaxiin ah oo u kala tartamaaya maamulada Jubbaland, Puntland iyo Koonfur Galbeed ee Somalia oo dhamaantooda uu khilaaf hoosaad kala dhexeeyo Dowlada Somalia.
Waxa uu Illo wareedka sheegay in xoghayaha guud ee Golaha iskaashiga uu kasoo xigtay in shirka ka dhacaaya magaalada Kismaayo diirada lagu saari doono sida looga badbaadi lahaa faragalin kaga imaada dhanka dowlada, Heshiiska shirka Brussels, Go’aan ka gaarista heshiisyo ay dowlada Somalia uga baxday maamulada iyo in si wada jira loo soo saaro mowqif mideysan.
Shirkan ayaa waxaa si gaara u wata Hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo shaqaaqada ugu badan xiligan ay kala dhexeyso dowlada Somalia waxa uuna doonayaa in khudbadiisa uu kusoo qaato dhaliilo uu ka muujinaayo khilaaf shirka Brussels ku dhexmaray dowlada iyo Jubbaland iyo go’aanka ay ku celsheen laba taliye oo dhawaan la sheegay in dowlada Somalia ay u magacawday deegaanada Jubbooyinka kuwaa oo mid kamid ah magacaabidiisa uu been noqday.
Waxyaabaha laga filankaro shirka ayaa waxaa kamid ah:-
1-Dib u dhac lagu sameeyo doorashooyinka ay gali doonaan maamulada Jubbaland, Koonfur galbeed iyo Puntland, oo khilaaf uu kala dhexeeyo dowlada.
2-Haddii la qabanaayo doorashooyinka Seddexda maamul in si wada jira looga mamnuuco korjoogtada dowlada ee dhanka doorashooyinka.
3-Ku dhawaaqida inaysan wada shaqeyn danbe la sameyn doonin Madaxtooyada Somalia.
4-Waxaa suuragal ah in si toosa ay ugu dhawaaqan inay xiriirka u jareen dowlada Somalia, maadaama ay jirto baqdin dhanka faragalinta doorashada.
Dowlada Somalia ayaa waxa ay ku khasban tahay inay raadiso xalka maamul Goboleedyada maadaama aysan ku filneyn maamulida keliya magaalada Muqdisho, waxaana jira dacwado ka imaanaya maamulada kaa oo ku qotoma in dowlada Somalia ay hakisay qoondadii ay siin jirtay qaar kamid ah maamulada.
Sidoo kale, Hogaamiyayaasha maamulada ayaa waxaa ka go’an inay difaacdan kuraastooda iyaga oo taa u maraaya inay tashwiish ku furan xiriirkii kala dhexeeyay dowlada si ay u dhameystaan wakhtiga u harsan.
Dhinaca kale, maamulada hadii ay dowlada Somalia u jaraan xiriirka waxa ay taasi ka dhigan tahay in dowladu aysan kormeerayaal u diri Karin doorashooyinka maamulada, kuwaa oo suuragal ah in loo diido ka degista Garoomada maamulada.
Previous articleDagaal Ka Soconaya Gobolka Gedo
Next articleMW Farmaajo oo ka abaabulaya magaalada Neyroobi shirweynaha beelaha Daarood oo looga soo horjeedo hogaanka Jubbaland
Askari ka Tirsan Ciidanka Dowlada oo ruux dhalinyaro ahaa ku dilay...
Madaxweyne Farmaajo oo 2-Arin Awgeed ay suuragal tahay in uu Dhuusamareeb...